Fitaterana an-drenivohitra :: Ho hentitra amin’ny fampanajana ny bokin’andraikitra ireo kaoperativa • AoRaha
Fitaterana an-drenivohitra Ho hentitra amin’ny fampanajana ny bokin’andraikitra ireo kaoperativa
Mila ezaka. Mbola miandry hatrany ny fanatsarana ny sehatry ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra ny mpanjifa, indrindra amin’ny lafiny fiarovana ny ain’izy ireo amin’ny loza maro samihafa miseho amin’ity karazam-pitaterana ity. Nisesisesy rahateo ny lozam-pifamoivoizana nataon’ireo taksibe tato ho ato, toy ny niseho teny Malaza ny zoma lasa teo izay namoizana olona iray.
Misy ireo kaoperativa tena ahitana tsy fanarahan- dalàna maro an-kilany. Etsy an-daniny misy kosa ireo efa miezaka manamafy ny fiarovana ny ain’ ireo mpanjifany amin’ny fanaraha-maso ny fiara mitatitra olona ao aminy. “Ny fiara izay tsy velona eo am-piandrasana ny laharana dia tsy mahazo mandeha raha tsy manam- boatra aloha. Ankoatra izay, raha misy simba hafa na ny bateria fotsiny aza dia tsy maintsy amboarina mba hiarovana ny loza. Efa samy maharaka izany avokoa ny mpitatitra rehetra”, hoy i Victorien Emelain , filohan’ny kaoperativa Malakia, ivondronan’ny zotra 126 sy 157, omaly.
Nisy ny fihaonana nataon’ireo mpisehatra amin’ny fitaterana an-drenivohitra ny alakamisy lasa teo niaraka tamin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Fotoana nizarana tamin’ ireo mpitatitra ny bokin’ andraikitra izay navoakan’ ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Araka ny fantatra, anjaran’ ny filohan’ny kaoperativa no mampahafantatra ny tompon’ny fiara, ny mpamily sy ny mpanampy azy ny voalaza ao anatin’ io bokin’andraikitra io. “Tokony hisy ny vokatra ho hita afaka herinandro na tapa-bolana raha manaja an’iny daholo ny mpitatitra rehetra”, hoy Raveloson Landy, talen’ny fitaterana eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Samy miandry ny vokatry ny famakiana sy fampiharana izay voalaza ao amin’ity bokin’ andraikitra ity izany ny rehetra. Voalaza mazava tsara ao ny tokony hatao sy ny tsy azo atao rehetra mahakasika ny fitaterana. Efa voasoritra ao anatin’ izany ihany koa ny anjara andraikitry ny mpisehatra rehetra eo amin’ny fitaterana manomboka amin’ny kaominina izay namoaka izany hatramin’ny
kaoperativa, ny mpamily sy ny mpanampy azy ary ny mpanjifa ihany koa.
Fivoarana tarika ankizy Hamoaka ny rakikira voalohany ry Zaza Kanto
Fanenjehana olona ambony Miandry ny fanapahan-kevitry ny Antenimierampirenena sisa ny HCJ
Fitaterana an-drenivohitra :: Ho hentitra amin’ny fampanajana ny bokin’andraikitra ireo kaoperativa - ewa.mg dit :
[…] Fitaterana an-drenivohitra :: Ho hentitra amin’ny fampanajana ny bokin’andraikitra ireo kaoperat… est apparu en premier sur […]
Lanonam-pahatsiarovana :: Nomen-danja ireo mpitandro filaminana maty sy maratra am-perinasa
Fitantanan-draharaham-panjakana :: Nanamafy ny firosoana amin’ ny fanadiovana faobe ny Praiminisitra